TRUESTORY: June 2014
Posted by Gentle Men at 1:31 PM No comments:
ဂီတလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ အောင်မြင်မှုတွေ ရနေ ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှု အခိုင်အမာရရှိ ထားသူဖြစ်သလိုလတ်တလောမှာတတိ
ယမြောက် တစ်ကိုယ်တော် Playboy ဆိုပြီး ထွက်ရှိထားတဲ့ အေသင်ချိုဆွေကို ပရိသတ် စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ သူမရဲ့ချစ်သူ pepsi နဲ့ ဘယ်တော့အိမ်ထောင်ပြု ဖြစ်မလဲဆိုတာနဲ့
Posted by Gentle Men at 1:20 PM No comments:
‘‘တစ်ယောက်ကို သုံးသိန်းပဲ ရတာ။ ဘာမှလည်းရတာမဟုတ် ဘူး။ အဲဒါတောင်အကြွေး၊
လတ်တလော ပြည်တွင်းမီဒီယာအသိုင်းအ၀ိုင်း၌ ရဲတပ်ဖွဲ့ က ခေါ်ယူမေးမြန်းနေ သည့် အရင်းအနှီး၊ ၀င်ငွေ၊ အမြတ်၊ အရှုံးနှင့် လည်ပတ်မှုတို့နှင့်ပတ်သက်၍ စာနယ်ဇင်းကောင်စီက ဆန့်ကျင်သည့် ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပြီး Eleven Media Group မှ မသွားနိုင် ဟု
Posted by Gentle Men at 1:04 PM No comments:
ရန်ကုန်မြို့ ပြည်လမ်း ပြည်သူ့ရင်ပြင်ရှေ့တွင် ကားရှစ်စီး ဆင့်တိုက်မှု ဖြစ်ပွား
ပြည်သူ့ရင်ပြင်နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရရုံးတို့ရှေ့ ပြည်လမ်းဆူးလေဘက်သို့ သွားသော လမ်းမဘက်ခြမ်းတွင် လင်ခရူဆာ ဆိုက်ကနက်စ်ကားက ပွိုင့်မိ၍ရပ်နေသော ကားများကို ဆက်တိုက် တိုက်မိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး
Posted by Gentle Men at 12:58 PM No comments:
ရထားပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး တို့ဟာ ပြည်တွင်း ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီနှစ် ခုနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ဘတ်စ်ကား ယာဉ်လိုင်းသစ်တွေ ဇူလိုင်လကုန်မှာ ပြေးဆွဲတော့ပါမယ်။ကုမ္ပဏီ တစ်ခုကို ဘတ်စ်ကား ၇၅ စီး ပြေးဆွဲမှာဖြစ်ပြီး စပါယ်ယာမပါဘဲ ကျသင့်ငွေကို ပုံးတွေ၊ ကတ်စနစ် (E-Ticket) တွေနဲ့ ကောက်ခံသွားမယ်လို့ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ဌာန ဆီကနေ သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မှတ်တိုင်တွေကိုလည်း LED Board တွေမှာ ဖော်ပြမှာ ဖြစ်ပြီး လုံခြုံရေး CCTV ကင်မ
Posted by Gentle Men at 12:50 PM No comments:
နာမည်ကျော် messaging app ဖြစ်သည့် WeChat သည် SMS သုံးစွဲသူများအပေါ်တွင် ကြီးမားသည့် အကျိုးသက်ရောက် မှု ဖြစ်ပေါ် ခဲ့ပြီး ပျှမ်းမျှ SMS ပေးပို့မှုနှုန်းသည် လူတစ် ဦးလျှင် တစ်လ ၃၉.၈ စောင်သာရှိခဲ့ကာ တစ်ရက်လျှင် ၁.၃ စောင်သာရှိခဲ့ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ၏ စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် အချက် အလက် နည်းပညာ ဝန်ကြီးဌာန (MIIT)
Posted by Gentle Men at 10:16 AM No comments:
ဇူလိုင် ၂ ရက်မှစ၍ GSM နှင့် WCDMA မိုဘိုင်းဖုန်းများ ပြည်ပနိုင်ငံ ၃၁ နိုင်ငံသို့ သယ်ဆောင်အသုံးပြုခွင့် ပြုမည် Jun 27, 2014
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၏ GSM နှင့်WCDMA ဖုန်း ကိုင်ဆောင်အသုံးပြုသူများ ပြည်ပနိုင်ငံ ၃၁ နိုင်ငံသို့ မိမိအသုံးပြုနေသည့်ဖုန်းများ သယ်ဆောင်အသုံးပြု ခွင့်ကို ဇူလိုင် ၂ ရက်မှ စတင်ခွင့်ပြု မည်ဖြစ်ကြောင်းကို ဇူလိုင် ၂၆ ရက် ညပိုင်း မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားသတင်းတွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
“International Outbound Roming သွားရောက်သုံးစွဲနိုင်တဲ့ နိုင်ငံပေါင်း ၃၁ နိုင်ငံ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးစွဲသူများအနေနဲ့ Prepaid ဖုန်းရော Postpaid ဖုန်းနှစ်မျိုးစလုံး သုံး
Posted by Gentle Men at 10:12 AM No comments:
အိန္ဒိယရေတပ်သည် နိုင်ငံ၏ အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုး တန်းရှိ Visakhapatnam နှင့် ကီလိုမီတာ (၂၀၀)ခန့်အတွင်း Project Code-Named အားဖြင့် Varsha အမည်ရ လျို့ဝှက် Naval Base တစ်ခုကို တည်ဆောက်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ကနဦးသတင်းများအရ Gangavaram နေ ရာတွင် New Naval Base စတင်တည်ဆောက်နေပြီ ဖြစ် သည်ဟု ဆိုသည်။
အဆိုပါ New Base တွင် အိန္ဒိယရေတက်၏ Arihant-Class
Posted by Gentle Men at 9:57 AM No comments:
လောင်းကစားဆန်တဲ့ ကစားနည်းတွေကို လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ကစားကွင်းတွေကို သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့ပေါင်းစုံ ပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့က ရှောင်တခင် ဝင်ရောက်စစ်ဆေးတော့မယ်လို့ ရန်ကုန်မြို့တော်
အစိုးရဖိအားမရှိပဲ ငွေကြေးအခက်အခဲကြောင့် ယူနတီသတင်းဂျာနယ် ထုတ်ဝေမှု ယာယီရပ်ဆိုင်း
ပြည်တွင်း အပတ်စဉ်ထုတ် သတင်း
ယူနတီဂျာနယ်၏ ရုံးအဖွဲ့မှူးထံမှ သိရသည်။
သတင်းဂျာနယ်အား ယာယီရပ်ဆိုင်းမှုကို လက်ရှိ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသည့် ဒယ်ဒီတာ ကိုရဲဝင်းနောင်၊ ရုံးအဖွဲ့မှူးကို အောင်ဝင်းထွန်းနှင့်
ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း) ညောင်ရွှေမြို့
နယ် ခေါင်တိုင်ကျေးရွာ အုပ်စုရှိ သမိုင်းဝင်
ရွှေမြင်တင် ဘုရားကြီး၌ မေ ၈ ရက်မှ
စတင် ရောက်ရှိနေသော ဘုရားဖူး
စပါးအုံး မြွေကြီးနှစ်ကောင် အနက်မှ
မြွေကြီးတစ်ကောင်မှာ မေ ၂၁ ရက်မှ
စတင်၍ ဥများ ဥနေကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ဥများ ဥနေသည့် စပါးအုံး မြွေကြီးမှာ ယခုအခါ ဥ ၁၅ လုံးခန့်ရှိကာ မြွေကြီး
ရန်ကုန်၊ မဇ္ဈိမ။ ။ ဗိုလ်ချုပ်မောင်မောင်အုန်းကို
ရခိုင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ်အဖြစ် ခန့်အပ်နိုင်ရန်
ပြည်နယ်လွှတ်တော် အစည်းအဝေးသို့ ဇွန် ၂၅
ရက်တွင် သမ္မတက သ၀ဏ်လွှာပေးပို့လိုက်ပြီး
ဖြစ်သည်ဟု ကျောက်တော်မြို့ ပြည်နယ်
“သမ္မတ ပေးပို့တဲ့ သ၀ဏ်လွှာကို ဖတ်ကြားတယ်၊ ၃၀ ရက်နေ့မှာ လွှတ်တော်က
Posted by Gentle Men at 12:43 PM No comments:
ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ကို ရူးသွပ်သောအာကာသယာဉ်မှူးများ အာကာသထဲကတဆင့် ဘောလုံးပွဲများ တိုက်ရိုက် ကြည့်ရှုနေ
နာဆာ ရဲ့ အာကာသယာဉ်မှူးတွေ ဖြစ်တဲ့ Reid Wiseman၊ Steve Swanson နဲ့ ဥရောပအာကာသအေဂျင်စီ က ဂျာမနီနိုင်ငံသား အာကာသ ယာဉ်မှူး Alexander Gerst တို့ ဟာ ၂၀၁၄ ဘရာဇီးကမ္ဘာ့ဖလားဘော လုံးပြိုင်ပွဲ ကို အာကာသကနေ တိုက်ရိုက်ကြည့်နေကြပါတယ်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအာကာသ
စခန်းအတွင်းမှာ တပ်ဆင် ထားတဲ့ ဒေတာဖမ်းစက်ကနေ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနေကြကြောင်း နာဆာက တရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့
Posted by Gentle Men at 4:26 PM No comments:
မြန်မာစာဖတ် ပရိသတ်တွေရဲ့ ကြားမှာ ဝေဖန်သံတွေ ဆူညံခဲ့တဲ့ ရိုမန်းဘော့ထ်တွေရဲ့ကမ္ဘာ အမည်ရ စာအုပ်ကို တရားစွဲမယ်လို့ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မူပိုင်ခွင့်နှင့် မှတ်ပုံတင်ရုံးက
အခုလပိုင်းတွေမှာ (၄၃၆) ဆိုတာ အရမ်းကိုခေတ် စားတယ်... ပြင်ရမယ်လို့ ယုံကြည်တဲ့သူတွေကလည်း ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ တတပ်တအား (ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ)ပါဝင်ကြတယ်။ ပြင်
NLD ပါတီဝင်များနှင့် ဒေါ်စုထောက်ခံသူများရဲ့ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း ခံနေရသူ ဒေါ်ခင်ဝိုင်းကြည်၏ နေအိမ် အဖောက်ခံရ ကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် NLD ကိုအကြပ်ရိုက်စေခဲ့သည့် အချိုးက ကိုယ်စားလှယ် PR စနစ် အသက်သွင်းသူ NDF ပါတီမှာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်ဝိုင်းကြည်အိမ်မှာ ညသန်းခေါင်အချိန် အဖောက်ခံခဲ့ရပြီး တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး အကြောင်း ပြောသူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ လူ့အခွင့်အရေး အကြောင်း အမြဲ စိုးရိမ် တတ်သူ
၁၉၇၃ ခုနှစ် တိုက်ပွဲဖြစ်
မြန်မာ့လက်ရွေးစင် ဘောလုံးအသင်းနဲ့ ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်
အသင်းရဲ့ ကွင်းလယ်ကစားသမား ကြည်လင်းဟာ အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးကို အဓမ္မကျူးလွန်ခဲ့တယ် ဆိုပြီး အမှုဖွင့် ခံထားရပါတယ်။ အဲ့ဒီကိစ္စကို နှစ်ဖက်မိဘတွေ ဆွေးနွေးမှု အပြီးမှာ ပြေလည်မှု ရသွားပြီလို့ ဆိုပါတယ်။
အခုတော့ အဲဒီမိန်းကလေးကို ကြည်လင်းက တောင်းရမ်း လက်ထပ် ရတော့မှာပါ။ လက်ထပ်ဖို့လည်း စီစဉ်နေပြီလို့ ကြည်လင်း မိသားစုဝင်တွေနဲ့ နီးစပ်
Posted by Gentle Men at 2:02 PM No comments:
စစ်ရေးအမြင်ရှိသူ ဖြစ်ရမယ်ဆိုရင် ...
လို့  ပြောကြသလို ....
ရှေးခေတ် တော်လှန်ရေး စစ်ကားတွေ
ပဲ ရိုက်နေသလိုမျိုး ....
၈၈အရေးက မတက်တော့ဘဲ ....
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အရေး ဟာ ....၂၆ နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိ ....သီဟတင်စိုး တော် လှန်ရေး
မြဝတီဘက်မှတစ်ဆင့် နယ်ခြားသောင်ရင်းမြစ်ကိုဖြတ် ကူးကာထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ သို့ လူတစ် ဦးလျှင် ထိုင်းဘတ် ငွေ တစ်သောင်းခွဲ အကုန်အကျခံ ခိုးဝင်လာသောမြန်မာနိုင်ငံသား ၁၈ ဦးကို
Posted by Gentle Men at 1:55 PM No comments:
မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ပြည်သူများအား စစ်အစိုးရ ကာလအတွင်း ဖမ်းဆီးနှိပ်ကွပ်ရာ၌ ကမ္ဘာကျော်ခဲ့သော တပ်မတော် ထောက်လှမ်းရေး ညွှန်ကြားရေးမှူး ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့် ၀န်ကြီးချုပ် တာဝန်ယူသည့် အစိုးရ၌ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဖြစ် စွမ်းစွမ်းတမံ ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ဦးဝင်းအောင်၏သား ပိုင်ဆိုင်သည့်7Day Daily သတင်းစာ ဇွန်လ ၁၇ ရက်နှင့် ၁၈ ရက် ဆက်
ဦးဆန်းဆင့် ကို ထုတ်ပယ်၊ ဦးလှမောင်တင်အား ထွက်ခွင့်ပေး
လက်ရွေးစဉ် ဘောလုံးသမား ကြည်လင်း မိန်းမကိစ္စ ပြန်လည်ရှင်းလင်း
ဒီနေ့ မွန်းတည့် ၁၂း၀၀ နာရီလောက်မှာ
စကြားရတာက မောင်ကြည်ကိစ္စ။ ဆက်
သွယ် သတင်းပေးလာသူက အားကစား
မီဒီယာက ညီငယ်လေး တစ်ဦးဖြစ်တဲ့
ကျော်သူစိုး။ ခေါင်းနပန်းတွေ ကြီးသွား
သလို တော်တော်ကို စိုးရိမ်ပူပန်မိ
ပါတယ်။ ချက်ခြင်း ဒီသတင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အတည်ပြုပေးနိုင်တဲ့လူတွေ သိနိုင်တဲ့ လူတွေ ဆီ
(ပလေတို...ဖတ်ရှု စဉ်းစားခံစား ခြယ်မှုန်းသည်)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတ မဖြစ်နိုင်တော့ရင် ဘာဆက်လုပ်မလဲ ဆိုတဲ့
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် ဖတ်မိတော့ ညီမျှခြင်းတွေ ချကြည့်မိပါတယ်...
ပလေတို...ဖတ်ရှု စဉ်းစားခံစား ခြယ်မှုန်းသည် ပေါ့
ဒီကနေ့ ရေပန်းအစားဆုံး စကားလုံး
ကတော့....Angry Bird ဖြစ်ပါတယ်...
ဖွဘုတ်သုံးစွဲသူတွေ အကြားမှာ ဘူးလက်ရဲ့
Angry Bird က တော်တော်လေးကို
တချို့ကလည်း လဒ လို့ မပြော တာ ကျေးဇူးတင်ရဦးမယ် ဆိုပြီး ကောက်ချက် ချပါတယ်...တချို့ကလည်း အန်းဂရီးဒေါင်း ပုံတွေ ဂုဏ်ပြုပြီး ဖော်ပြကြတာကို တွေ့ ရပါတယ်..
.နှစ်ဘက်သော အုပ်စုတွေကြားထဲမှာလဲ ဘူးလက်ကို အမှုန့်ကြိတ်ပစ်လိုသူတွေ...အန်းဂရီးဒေါင်းကို
အီရတ်နိုင်ငံ တီကရစ်မြို့တွင် လူအစုလိုက်အပြုံလိုက် စစ်သွေးကြွများ သတ်ဖြတ်မှု
အစ္စလာမ်မစ်စစ်သွေး ကြွများက အီရတ်နိုင်ငံ
မြောက် ပိုင်းဒေသများစွာကို သိမ်းပိုက်ပြီး
နောက် မြို့တော်ဘဂ္ဂဒက်သို့ ထိုး စစ်ဆင်နေစဉ် အီရတ်စစ်သား ရာပေါင်းများစွာအား သတ်ဖြတ် လိုက်သည်ဟုပြောသော အစ္စ လာမ်မစ် စစ်သွေးကြွများ၏ ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ အစုလိုက် အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှုကို အမေ
အလုပ် မရှိဘူး ဟုတ်လား? ဘာလို့ စားပွဲထိုး မလုပ်တာလဲ? - အက်စတာမက်ဗီ
အက်စတာ မက်ဗီ ဆိုတာ အသက် ၄၇ နှစ်သာ ရှိသေးတဲ့ ဗြိတိန်ရဲ့ အလုပ်သမား ရေးရာ ဝန်ကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာတင်မက
ဗြိတိန်မှာပါ အလုပ်ရှားပါးမှု ပြဿနာ ကြုံတွေ့နေတုန်း သူပြောတဲ့ စကားဟာ အတော်လေး ကမ္ဘာကျော်သွား ပါတယ်။
'အလုပ်မရှိဘူးလား? ဘာလို့ ကော်ဖီဘားမှာ စားပွဲထိုး မလုပ်တာလဲ' တဲ့။ သူမက ဆက်ပြော
မြန်မာကာယ အလှမယ် အေးအေးစိုး Women's Athletic Physique ပြိုင်ပွဲတွင် ပထမဆုရရှိ
စင်ကာပူနိုင်ငံ NUS Center ၌ ဇွန် ၁၃ ရက်မှ
၁၆ ရက်အထိ ကျင်းပခဲ့သော (၁၂) ကြိမ်မြောက်
အရှေ့တောင်အာရှ ကာယဗလနှင့် ကာယကြံ့
ခိုင်မှု အားကစားတံခွန်စိုက် ပြိုင်ပွဲကြီး၏
Women's Athletic Physique ပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာနိုင်
ငံ ကိုယ်စားပြုအဖြစ် သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်
ခဲ့သော ကာယအလှ မယ် အေးအေးစိုးသည်
ပထမဆုရရှိခဲ့ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ကာယ
ဗလနှင့် ကာယကြံ့ခိုင်မှု အားကစား အဖွဲ့ချုပ်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ခွပ်ဒေါင်းမဟုတ်၊ Angry Bird စိတ်တိုနေသည့် ငှက်မကြီးသာဖြစ် ဟု လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက ပြော
နေပြည်တော်၊ တပ်ကုန်းမြို့မှ အသက် ၇၆ နှစ်အရွယ် ရှိ
ဦးစန်းလွင်နှင့် ပြဿနာ ဖြစ်ပွားခဲ့နှင့် ပတ်သက်၍ ဒေါ်အောင်
ဆန်းစုကြည်သည် ခွပ်ဒေါင်းမဟုတ်၊ Angry Bird စိတ်တိုနေ သည့် ငှက်မကြီးသာ ဖြစ်ကြောင်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးက ပြောကြားလိုက်သည်။
၄င်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်က “ ပြောရရင် နိုင်ငံရေးသမား ဆို တာ ဝေဖန်တာကို အပြုံး မပျက်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် နားထောင်ရမှာ ပဲ။ ဥပမာ အမေရိကန်သမ္မတ ဂျော့ဒဗလျူဘွရှ် ကို Press တစ်ခုမှာ ဖိနပ်နဲ့ လှမ်းပေါက် လိုက်တယ်။ ဒါတောင် အမေရိကန်သမ္မတ နော်။ ထိတော့ မထိဘူး သူက ရှောင် လိုက်နိုင်တယ်။ ဒီမှာပဲ သူက ကျွန်တော့်ကိုပေါက် လိုက်တဲ့ဖိနပ် က နံပါတ် ၇ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဆိုပြီး ဟာသ လုပ်ပစ်လိုက် တယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကအဲဒီလိုသဘော မထားနိုင်
ကွန်တိန်နာကားဖြင့် နယ်လှည့်ကွန်ပျူတာသင်ရန် ကွန်တိန်နာ အလုံးရေ ၁၀၀ ခန့် တောင်းခံထား
ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးတွင် အဓိက ဖြစ်လာနိုင်
သည့် နည်းပညာဆိုင်ရာများ တတ်မြောက်
ရန် ရည်ရွယ်သော Mobile School
စုစုပေါင်း ကွန်တိန်နာ အလုံးရေ ၁၀၀ ခန့်မှာထားကြောင်း ၁၄-၆-၂၀၁၄ ရက်က သတင်းရရှိ
အများပြည်သူသုံး သန့်စင်ခန်း ဖွင့်လှစ်လိုသူများ စည်ပင်သို့ လျှောက်ထားနိုင်
သည် ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး
ပြောကြားသည်။ “အရင်ကတော့ ဌာန
အခုတော့ လုပ်ချင်တဲ့သူတိုင်း ဌာနက လိုအပ်သလို ခွင့်ပြုပေးမှာပါ” ဟု ၄င်းက ရှင်းပြသည်။ အများပြည်သူသုံး သန့်စင်ခန်း ဖွင့်လှစ်
ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသား အလုပ်သမားများ သိစေဖို့ ဒီအကြောင်းကို အမြန်ဖြန့်ပေးကြပါ
● Work Permit နှင့် Passport များကို သတိတရ ကိုယ်နှင့်မကွာ ဆောင်ထားကြ
● အကယ်၍ ဖမ်းဆီးမှုများ ရှိပါက၊ ဖမ်းဆီးခံရခြင်းများ ကြုံတွေ့ရ
ဖြစ်စဉ်မှာ ယခုလ ၁ဝ ရက် နံနက် ၉ နာရီတွင် မဝင်းဝင်းသော် (၃၅နှစ်)သည် အကြွေးတောင်း ပြီးပြန်လာစဉ် ဗိုလ်အောင်ကျော် လမ်းနှင့်ဗညားဒလလမ်း သစ္စာရိပ် လက်ဖက်ရည် ဆိုင် ရှေ့
အဖေဖြစ်သူရဲ့ အုတ်ဂူရှေ့တွင် ဂစ်တာတီးပြီး သီချင်းဆိုကာ ကျေးဇူးဆပ်တဲ့ မီးမီးခဲ
6/16/2014 New Myanmar News No comments
ဇွန်လ၁၅ရက်တွင် ကျရောက်သော အဖေများနေ့၌ ဖခင်ဂီတသမားကြီး ဦးစောဘွဲ့မှူး အုတ်ဂူရှေ့တွင် ဖခင်အတွက် ရည်စူးကာ ကိုယ်တိုင်ရေးစပ် ထားသောသီချင်းဖြင့် သီဆိုဂုဏ်ပြုခဲ့ကြောင်း သမီးဖြစ်သူ အဆိုတော် မီးမီးခဲကပြောသည်။
‘‘ဒီသီချင်းက အဖေ့အတွက် ရည်စူးပြီး ရေးထား တာကြာပါပြီ။ တစ်ခါမှ အုတ်ဂူရှေ့မှာ သွားမဆိုဖူးတော့
မြန်မာသံတော်ဆင့်ဂျာနယ် အတွဲ(၃) အမှတ်(၁၄) ဇွန် ၁၄-၂၀/၂၀၁၄ -ခုနှစ်ထုတ်စာစောင်
ဒီမိုကရေစီနှင့်ဝေးကွာခဲ့သည့်အတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအလောသုံးဆယ်လုပ်ရန်မသင့်ကြောင်း သမ္မတပြောကြား
ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၁၄- မြန်မာနိုင်ငံသည် ဒီမို
ကရေစီစနစ်နှင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ ဝေးကွာ
ခဲ့သည့်အတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဆောင်
ရွက်ရာတွင် အလောသုံးဆယ် ပြောင်းလဲရန်
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် က ''တိုင်းပြည်က ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ နှစ် ပေါင်းများစွာ ဝေးကွာ ခဲ့
တစ်ယောက် မနေ့က သူမဖုန်း အလစ်သုတ်
ခံခဲ့ရကြောင်း ကျွန်တော့်ကို လာပြောပြပါတယ်။
သူမကို ဂျာနယ်တစ်စောင်မှဟုဆိုကာ အင်တာ
ဗျူးချင်ကြောင်း ပြောလာတဲ့အတွက် သူမနေ
ထိုင်ရာ မြောက်ဒဂုံနားက ကော်ဖီဆိုင်တစ်ခု
မှာ ချိန်းလိုက်ပါသတဲ့။အဲဒီမှာ ပြည့်စုံလို့ သူမ နာမည်သိရှိထားသူက မေးခွန်းစာရွက်နဲ့ ဘောလ်ပင်
ထုတ်ပေးပြီး အင်တျာေူးကိုဖြေခိုင်းပါသတဲ့။ ပြီးတော့ ဖုန်းတစ်ကောလ်လောက်ပေးဆက်ပါဆိုပြီး ဖုန်းတောင်းဆက်တာကို သူမက ပေးလိုက်တဲ့အခါ
UNFCCI ၏ နိဂုံးချုပ်အစည်းအဝေးတွင် ၀န်ကြီးဦးအောင်မင်းမှ တပ်မတော်က သစ္စာဆိုတဲ့အထဲမှာ အဓိကကျတဲ့ တစ်ချက်ဆိုရင် ‘ငါတို့သည် ကျဆုံးလေပြီးသော တပ်မတော်သား တို့ ၏ သစ္စာကို စောင့်သိရိုသေပါ
နီပေါပါလီမန်မှာ မနေ့က မိန့်ခွန်းပြောကြားချိန်မှာ
‘‘ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကွန်ရက် ကို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့
ဇွန်လ ၁၆ ရက် ၂၀၁၄ ခုနှစ်
မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း ပြိုင်ပွဲတွင် Mahmoud Salama ကို ပထမအချီ မိနစ်ပိုင်းအတွင်း လက်သီးတွဲ
ဒုတိယဘုရားသခင် ဆိုတော့လဲ သံဃာတွေနဲ့တစ်တန်းထဲထိုင်တာဆန်းသလား
ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်း
တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်
အဖွဲ့ သည် နီပေါ နိုင်ငံရှိ B.P. Koirala
Memorial Planetorium, Observatory
and Science Museum သွားရောက်လေ့
လာကာ B.P. Koirala Memorial
Planetorium, Observatory and Science Museum မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ ဆုံခဲ့ပါသည်။
From: Aunghtut Thet
Posted by Gentle Men at 2:11 PM No comments:
နှစ်ပတ်ကြာပြီဖြစ်သော်လည်း ဒေါ်စု အရှက်ကွဲခဲ့သည့် တပ်ကုန်း စကားရည်လုပွဲ စာစောင်များ ရောင်းကောင်းနေဆဲ
နှစ်ပတ်ကြာပြီဖြစ်သော်လည်း ဒေါ်စု အရှက်ကွဲခဲ့သည့် တပ်ကုန်း စကားရည်လုပွဲ စာစောင်များ ရောင်းကောင်းနေ ဆဲဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်ရပ်ကွက်၊ ၂၆×၂၇လမ်းကြား၊ ၈၄×၈၅လမ်းကြားရှိ ဈေးချိုတော် အတွင်းရှိဈေးသည်များနှင့်၎င်းဈေးချိုအနီးရှိ လမ်းဘေးဈေး သည် များထံသို့ (NLD) ပါတီဗဟိုဥက္ကဋ္ဌဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံပါ
ပြည်သူမှပြည်သူသို့ သတင်းလွှာ အတွဲ(၁) အမှတ်(၂)၊ အတွဲ(၁) အမှတ်(၃)တို့ ရောက်ရှိလာပါသည်။
အဆိုပါဂျာနယ် အတွဲ(၁)အမှတ်(၂)တွင် ဒေါ်စုဟက်တက်ကွဲတဲ့ပွဲ ၊
(ဟုတ်ပြီ အဲဒါကို Record လုပ်ထားပါ) တပ်ကုန်းက အသက်(၇၆)နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ အဘကြီး ဦးစန်းလွင် နဲ့ဒေါ်စုတွေ့ ဆုံဆွေး နွေးတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကို
ရန်ကုန်-လားရှိုး ခရီးသည်တင်ယာဉ်တစ်စီး တိမ်းမှောက်၊ တစ်ဦးသေ ခြောက်ဦး ဒဏ်ရာရ
ရန်ကုန်နှင့် လားရှိုးပြေး ဆွဲသည့် တက်လမ်း ခရီးသည် တင်ယာဉ်သည် သီပေါမြို့အနီးတွင် တိမ်းမှောက် ခဲ့ပြီး ခရီးသည် အမျိုးသား တစ်ဦး သေဆုံးကာ ခြောက်ဦး ဒဏ်ရာ ရခဲ့ကြောင်း သီပေါမြို့မ ရဲစခန်းမှ သတင်း
ပြည်ထောင် စုလမ်း မကြီးပေါ်၌ မေလ ၁၁ ရက် နံနက် က အိမ်စီးကားတစ်စီးအား ၀င် တိုက်ကာ အရှိန်လွန်၍ လမ်းဘေး သို့ ထိုးကျသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်
Posted by Gentle Men at 1:52 PM No comments:
ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် နိုင်ငံခြားသား မိသားစုများကို သမ္မ တနေရာ ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းမှ ထိထိ ရောက်ရောက် ပိတ်ပင်ထားသော အခြေခံဥပဒေပုဒ်မ၅၉(စ)ကိုပြင် ဆင်ခြင်းမပြုရန် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်အခြေခံ ဥပဒေပြင် ဆင်နိုင်ရေး အကောင်အထည် ဖော်မှုကော်မတီက ကော်မတီအ တွင်း မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရာ မပြင်လို သော မဲကပို
Posted by Gentle Men at 4:36 PM No comments:
World Cup Opening 2014 - Ceremony BRAZIL - World Cup 2014 Brazil
Pitbull Jennifer Lopez Performance Opening Ceremony FIFA World Cup 2014
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ကရာချီလေဆိပ်မှာ လက်နက်အပြည့်အစုံ တတ်ဆင်ထားတဲ့ တာလီဗန် သေနတ်သမားတွေ စီးနင်း တိုက်ခိုက်ခဲ့တုံး တွေ့မြင်ရတဲ့ အခြေအနေတချို့ Jun 10, 2014